ဖွားဖက်တော်အရွယ်စား…..တကယ်အလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား ? – Gentleman Magazine
သင့်ရဲ့ဖွားဖက်တော်အရွယ်အစားကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရှာကြည့်ဖူးပါသလား ? ဒီကိစ္စကလည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖွားဖက်တော်ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး သောက်ဆေး၊လိမ်းဆေးတွေနဲ့ ပန့်တွေ၊ ကိရိယာတွေအကြောင်း တင်ထားတဲ့ပို့စ်ပေါင်း ၄ သန်းကျော်လောက်အထိ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းတွေက တကယ်ပဲအလုပ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ အဖြေက ရိုးရှင်းပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ အမျိုးသားလိင်တံရဲ့အရွယ်အစားကို ကြီးမားလာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရှည်ထွက်လာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ လိမ်းဆေးတွေနဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိသေးပါဘူး။
ဘာကြောင့် မဖြစ်နိုင်တာလဲဆိုတာကို သိဖို့အတွက်ကတော့ လိင်တံထောင်မတ်ချိန်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်တံမှာ ရေမြုပ်သဏ္ဍာန်တစ်ရှုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီး စိတ်ထကြွလာချိန် သွေးတွေစီးဝင်လာမှ တောင့်တင်းထောင်မတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လိင်တံအစိတ်အပိုင်းကို ဆီးခုံရိုးမှာ ဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အနေအထားပြုပြင်ဖို့က မလွယ်သလို လူပျိုဖော်ဝင်ကာစအချိန်မှ ရရှိတဲ့အရှည်ဟာ အမျိုးသားတစ်ယောက်အတွက် အရှည်ဆုံးအနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားအများစုက ပုံမှန်လိင်တံအရွယ်အစားက ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကို သေချာမသိကြပါဘူး။ ပါတနာရဲ့ အပြောစကား၊ အပြာကားတွေထဲက ဇာတ်ဆောင်တွေရဲ့အရွယ်အစားကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းကို သေးငယ်တယ်လို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သာမန်လိင်တံတစ်ခုရဲ့ အရွယ်အစားက (၅.၆)လက်မဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ္တဇဖြစ်နေရင် ဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်တွေက သင့်ပစ္စည်းတ၀ိုက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးအချက်ကတော့ အဆီပိုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်နဲ့ ဆီးခုံမှာအဆီပိုတွေ စုစည်းနေတဲ့အခါမှာ လိင်တံက သေးသွားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချမယ်ဆိုရင် လက်မအနည်းငယ်လောက်ရှည်ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ အမာရွတ်တစ်ရှုးတွေ စုပုံလာတာကြောင့် လိင်တံကောက်သွားတတ်တဲ့ Peyronie’s ရောဂါပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လိင်တံက ပုံမှန်ထက်ပိုပြီးကောက်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ဆီသွားပြဖို့ လိုနေပါပြီ။ သင့်ရဲ့ဆရာဝန်က လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့ ကုထုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီး ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ လိင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်တွေက တွေ့ကရာဆေးဝါးတွေ ၀ယ်သုံးနေမှာထက် ဆရာဝန်မှာကြားသမျှကို သေချာလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ လိင်တံကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ထက် အိပ်ရာထဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝချင်တာဆိုရင်တော့ သင့်ဖွားဖက်တော်ကို ဒုက္ခပေးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ရေး၊ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေမယ်ဆိုရင် အထူးကောင်းမွန်တဲ့ လိင်မှုဘ၀ကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါစေနိုင်ဖို့အတွက် လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကတော့ –
– တစ်ရက်ကို မိနစ်(၃၀) ဒါမှမဟုတ် တစ်ပတ်ကို မိနစ်(၁၅၀)ခန့် ခန္ဓာကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဆောင်ပါ။
– အ၀လွန်နေသူ၊ ကိုယ်အလေးချိန်များနေသူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ (၅)ရာခိုင်နှုန်းကနေ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပါ။
– အသီးအနှံတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပိုစားပါ။ အနီရောင်အသားတွေနဲ့ ပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေကို လျှော့စားပါ။ ပြည့်ဝဆီတွေကို ရှောင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဆီကို စားပါ။ သကြားနဲ့ အချိုဓာတ်များတဲ့ သောက်စရာတွေကို ရှောင်ပါ။
– တစ်နေ့ကို အရက်(၁)ခွက်(၂)ခွက်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ သတိပေးချင်တာက လိင်တံကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုက်မနေပါနဲ့။ အချိန်တိုအတွင်း ကြီးမားရှည်လျားလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ဆေးခန်းတွေကိုလည်း ဝေးဝေးကရှောင်ပါ။ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးများပြီး တစ်ဘ၀လုံး လူညွန့်တုံးသွားတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ဖှားဖကျတျောအရှယျအစားကွီးမားဖှံ့ဖွိုးလာစမေယျ့ နညျးလမျးတှကေို အငျတာနကျပျေါမှာ ရှာကွညျ့ဖူးပါသလား ? ဒီကိစ်စကလညျး အငျတာနကျပျေါမှာ ရပေနျးစားတဲ့ခေါငျးစဉျတဈခုဖွဈပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျ ဖှားဖကျတျောကွီးမားဖှံ့ဖွိုးလာဖို့နဲ့ပတျသကျပွီး သောကျဆေး၊လိမျးဆေးတှနေဲ့ ပနျ့တှေ၊ ကိရိယာတှအေကွောငျး တငျထားတဲ့ပို့ဈပေါငျး ၄ သနျးကြျောလောကျအထိ တှရေ့နိုငျပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးတှကေ တကယျပဲအလုပျဖွဈသလားဆိုတော့ အဖွကေ ရိုးရှငျးပါတယျ။
အလုပျမဖွဈပါဘူး။ ဒီနဒေီ့အခြိနျထိ အမြိုးသားလိငျတံရဲ့အရှယျအစားကို ကွီးမားလာအောငျပဲဖွဈဖွဈ၊ ရှညျထှကျလာအောငျပဲဖွဈဖွဈ လုပျပေးနိုငျတဲ့ ဆေးဝါးတှေ၊ လိမျးဆေးတှနေဲ့ ပစ်စညျးကိရိယာတှေ ဘာဆိုဘာမှ မရှိသေးပါဘူး။
ဘာကွောငျ့ မဖွဈနိုငျတာလဲဆိုတာကို သိဖို့အတှကျကတော့ လိငျတံထောငျမတျခြိနျမှာဖွဈပကျြတဲ့ ဖွဈစဉျကို သိထားဖို့လိုပါတယျ။ အမြိုးသားတှရေဲ့ လိငျတံမှာ ရမွေုပျသဏ်ဍာနျတဈရှုးတှနေဲ့ဖှဲ့စညျးထားပွီး စိတျထကွှလာခြိနျ သှေးတှစေီးဝငျလာမှ တောငျ့တငျးထောငျမတျလာတာဖွဈပါတယျ။ လိငျတံအစိတျအပိုငျးကို ဆီးခုံရိုးမှာ ဆကျသှယျထားတာဖွဈတဲ့အတှကျ အနအေထားပွုပွငျဖို့က မလှယျသလို လူပြိုဖျောဝငျကာစအခြိနျမှ ရရှိတဲ့အရှညျဟာ အမြိုးသားတဈယောကျအတှကျ အရှညျဆုံးအနအေထားပဲဖွဈပါတယျ။
အမြိုးသားအမြားစုက ပုံမှနျလိငျတံအရှယျအစားက ဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာကို သခြောမသိကွပါဘူး။ ပါတနာရဲ့ အပွောစကား၊ အပွာကားတှထေဲက ဇာတျဆောငျတှရေဲ့အရှယျအစားကို ကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ပစ်စညျးကို သေးငယျတယျလို့ ထငျနတေတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ သာမနျလိငျတံတဈခုရဲ့ အရှယျအစားက (၅.၆)လကျမဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့လိငျတံအရှယျအစားနဲ့ ပတျသကျပွီး စိတ်တဇဖွဈနရေငျ ဂရုစိုကျရမယျ့အခကျြတှကေ သငျ့ပစ်စညျးတဝိုကျမှာပဲ ရှိပါတယျ။ အဖွဈအမြားဆုံးအခကျြကတော့ အဆီပိုတှကွေောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဝမျးဗိုကျနဲ့ ဆီးခုံမှာအဆီပိုတှေ စုစညျးနတေဲ့အခါမှာ လိငျတံက သေးသှားတယျလို့ ထငျရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျလြှော့ခမြယျဆိုရငျ လကျမအနညျးငယျလောကျရှညျထှကျလာစနေိုငျပါတယျ။
နောကျတဈခကျြကတော့ အမာရှတျတဈရှုးတှေ စုပုံလာတာကွောငျ့ လိငျတံကောကျသှားတတျတဲ့ Peyronie’s ရောဂါပဲဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့လိငျတံက ပုံမှနျထကျပိုပွီးကောကျလာပွီဆိုရငျ ဆရာဝနျဆီသှားပွဖို့ လိုနပေါပွီ။ သငျ့ရဲ့ဆရာဝနျက လိုအပျတဲ့ဆေးဝါးနဲ့ ကုထုံးတှကေိုအသုံးပွုပွီး ပုံမှနျပွနျဖွဈအောငျ ကုသပေးနိုငျပါတယျ။ လိငျပစ်စညျးအရောငျးဆိုငျတှကေ တှကေ့ရာဆေးဝါးတှေ ဝယျသုံးနမှောထကျ ဆရာဝနျမှာကွားသမြှကို သခြောလိုကျနာဖို့လိုပါတယျ။
သငျ့အနနေဲ့ လိငျတံကွီးမားဖှံ့ဖွိုးလာဖို့ထကျ အိပျရာထဲမှာ စှမျးဆောငျရညျပွညျ့ဝခငျြတာဆိုရငျတော့ သငျ့ဖှားဖကျတျောကို ဒုက်ခပေးစရာမလိုပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျရေး၊ ကိုယျအလေးခြိနျနဲ့ နှလုံးကနျြးမာရေးကောငျးမှနျနမေယျဆိုရငျ အထူးကောငျးမှနျတဲ့ လိငျမှုဘဝကို ရရှိနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျသှားတိုငျးကိုယျပါစနေိုငျဖို့အတှကျ လိုကျနာရမယျ့အခကျြတှကေတော့ –
– တဈရကျကို မိနဈ(၃၀) ဒါမှမဟုတျ တဈပတျကို မိနဈ(၁၅၀)ခနျ့ ခန်ဓာကိုယျလကျလှုပျရှားလကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျဆောငျပါ။
– အဝလှနျနသေူ၊ ကိုယျအလေးခြိနျမြားနသေူဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ ကိုယျအလေးခြိနျရဲ့ (၅)ရာခိုငျနှုနျးကနေ (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးအထိ လြှော့ခပြါ။
– အသီးအနှံတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ ပိုစားပါ။ အနီရောငျအသားတှနေဲ့ ပွုပွငျထားတဲ့အသားတှကေို လြှော့စားပါ။ ပွညျ့ဝဆီတှကေို ရှောငျပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ဆီကို စားပါ။ သကွားနဲ့ အခြိုဓာတျမြားတဲ့ သောကျစရာတှကေို ရှောငျပါ။
– တဈနကေို့ အရကျ(၁)ခှကျ(၂)ခှကျထကျ ပိုမသောကျပါနဲ့။
နောကျဆုံးအခကျြအနနေဲ့ သတိပေးခငျြတာက လိငျတံကွီးမားဖှံ့ဖွိုးလာဖို့ကိုပဲ အာရုံစိုကျမနပေါနဲ့။ အခြိနျတိုအတှငျး ကွီးမားရှညျလြားလာအောငျလုပျပေးနိုငျတယျဆိုတဲ့ ဆေးခနျးတှကေိုလညျး ဝေးဝေးကရှောငျပါ။ ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးမြားပွီး တဈဘဝလုံး လူညှနျ့တုံးသှားတဲ့အထိ ဖွဈနိုငျကွောငျး သတိပေးလိုကျပါတယျ။
Previous: (၁၀)မိနစ်အတွင်း စိတ်ဖိစီးမှု ကင်းစင်သွားဖို့ နည်းလမး (၁၀)ခု
Next: အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်